Leeks - vokatra mahavariana ho an'i Russia - magazine "Potato System"
в Torohevitra momba ny manam-pahaizana manokana, vaovao
Ny leeks dia iray amin'ireo karazana tongolo sarobidy indrindra, mampiavaka azy ireo amin'ny tsiro malefaka malefaka ao aminy, ny otrikaina be dia be misy vitamina sy mineraly, ary koa fanoherana mangatsiaka. Io kolontsaina io dia miparitaka be any Eropa Andrefana, fa any Russia kosa dia mbola mitana toerana tsy misy dikany amin'ny habetsaky ny famokarana legioma na dia nitombo be aza ny lazany tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Nandritra ny fotoana elaela, dia tonga tany amin'ny magazay Rosiana ny ankamaroan'ny avy any ivelany. Ny fanondranana tampon (avy any Pays-Bas indrindra) dia voamarika tamin'ny 2013, raha 6,8 tapitrisa taonina no natolotra ny firenena. Taorian'ny fampidirana ny fanakanana sakafo Rosiana tamin'ny taona 2014, nijanona ny fanafarana vokatra legioma avy any Eropa, ny avy any amin'ny Repoblikan'i Belarus ihany no natao. Tamin'ny faran'ny taona 2020, dia manodidina ny 2 taonina fotsiny ny fanafarana hena. Araka izany, tao anatin'ny fito taona lasa, ny habetsaky ny fanafarana an'io vokatra io dia nilatsaka telo heny.
Na eo aza izany, androany, rehefa mihombo haingana ny fangatahana sakafo mahasalama, ny fanjifana ny hena dia manana fotoana rehetra hiverina amin'ny ambaratonga 2013, ary ny toeram-piompiana Rosiana dia mbola manana fotoana hibodoana akany foana ao amin'ny tsena.
Ireo singiolary mitombo
Ny volo dia azo vokarina mandavantaona. Ny karazany sy ny fomba fambolena isan-karazany dia atolotra isaky ny vanim-potoana maniry.
Ny tany mety ho an'ny paiso dia loam fasika sy tanimanga maivana, miaraka amin'ny 5-8% amin'ny humus.
Ny pH tanety dia tokony ho ambonin'ny 5,8, ary amin'ny tany tanimanga, 6,8 farafahakeliny.
Mba hamokarana vokatra mahasalama dia tsy maintsy jerena ny fihodinan'ny vokatra efatra.
Ireo mpialoha lalana miaraka amina rafitra faka efa mandroso sy mandroso tsara no aleony.
Voa sy zana-ketsa
Ny felana dia azo ambolena amin'ny famafazana mivantana sy ny zana-ketsa.
Tetikasa fambolena tsara indrindra: laharana roa, elanelana eo anelanelan'ny zavamaniry misesy - 10-15 cm, elanelana misy eo amin'ny laharana - 20-25 cm. Taham-pambolena: 100-000 zavamaniry isaky ny 200 ha.
Ny fambolena zana-ketsa dia tanterahina amin'ny alàlan'ny milina fambolena na mpihady multilink. Ity farany dia manao lavaka lalina 16-18cm izay ametrahana ny zana-ketsa.
Mba hahazoana fotony fotsy lava kokoa dia azo tanterahina ny fambolena anaty lavaka marivo, ary aorian'izay dia azo atao ny mamaly ny tendrony.
Alohan'ny hambolena amin'ny tany malalaka, ny ravin'ny zana-ketsa dia mila tapahina kely, izany dia manampy amin'ny fampifanarahana haingana ny andiana tanora amin'ny toerana vaovao, ny fiorenan'ny faka sy ny fivelaran'ny fotony. Ny ravina ravina tsirairay dia tsy maintsy arahana fitsaboana fungicida hisorohana aretina.
Saika ny zava-maniry rehetra aorian'ny fambolena dia ambanin'ny tany. Rehefa mamboly zavamaniry amin'ny mekanika dia misokatra hatrany ny lavaka. Ny fanondrahana Sprinkler dia tanterahina avy hatrany aorian'ny fambolena. Ny fanondrahana dia manampy amin'ny fametrahana ny lavaka sy ny fiorenan'ny zana-ketsa. Amin'ny fambolena an'io fomba io dia azonao atao ny manatratra tsiranoka mihombo kokoa.
Ny fikolokoloana rafitra dia misy andian-hetsika mahazatra: manondraka, fitsaboana manohitra ny aretina sy ny bibikely, ny zezika ary ny hilling.
Ny fampiakarana isan-kerinandro dia ahafahana mahazo vokatra misy tahony matevina sy avo. Ny fanaovana haingam-pandeha dia atao tsara aorian'ny fisotroan-drano, amin'ny hariva.
Ny tanana dia mijinja tanana na mekanika. Ny fotoana fijinjana tsara indrindra amin'ny karazany iray dia 2 ka hatramin'ny 3 herinandro, avy eo very vokatra ny vokatra.
Mandritra ny fijinjana, ny antsy an'ny mpijinja dia manapaka ny faka ambany indrindra amin'ny zavamaniry, ny tongolo dia nohadina ary entina any amin'ilay toerana. Manaraka, ny milina manokana manapaka ny faka sy ny ravina ambony.
Ny halavan'ny fotony mihosotra dia miankina amin'ny filan'ny tsena (fenitra takiana: ny ampahany fotsy amin'ilay fotony dia 14 sm farafahakeliny).
Toro-lalana fisafidianana "Bejo"
Ny leeks dia iray amin'ireo voly manandanja indrindra ho an'ny orinasa Bejo. Ny ezak'ireo mpiompy orinasa dia mikendry ny hahazoana karazana:
Miaraka amin'ny toetra ivelany tena tsara (ireo dia zavamaniry misy ravina miorina mitsangana, matevina, mahatohitra ny vaky, miavaka amin'ny loko maizin'ny ravina, manohitra ny voninkazo).
Miaraka amin'ny kalitaon'ny varotra nohatsaraina (nitombo ny halavany sy ny sakan'ny tsenan-tsena, tsy misy jiro, famirapiratry ny faritra fotsy amin'ny fotony).
Manohitra ny bibikely (thrips, fly onion, miner, aphids, spites mites) ary ny aretina (harafesina, Alternaria, phytophthora, Fusarium, lo faka mavo, aretina mikraoba).
Ireo karazana sy hybrida mampanantena
Columbus. Ny vanim-potoana mitombo dia 85 andro aorian'ny fidinan'ny zana-ketsa. Mitombo haingana, ho an'ny famokarana aloha. Maitso ny ravina, misy tahony misy faritra lava mihombo. Izy io dia ampiasaina amin'ny fanatanterahana sy fanodinana vaovao.
Lancelot. Ny vanim-potoana mitsaha-mitombo dia 92 andro aorian'ny fidinan'ny zana-ketsa. Karazana azo antoka miaraka amin'ny ravina maintso fotsy. Vatan-dravina, fandaminana ravina mitsangana. Atoro ho an'ny fihinanana, fanodinana ary fitahirizana vaovao hatramin'ny roa volana.
Forrest. Ny vanim-potoana maniry dia 150 andro aorian'ny fidinana ny zana-ketsa. Mety hojinjaina amin'ny fiandohan'ny lohataona any amin'ny faritra misy toetr'andro malefaka. Avela hamboly amin'ny ririnina. Matevina sy lava ny fotony. Maitso mainty ny ravina miaraka amina voninkazo mangatsiaka mamelana. Ho an'ny fanodinana sy fitehirizana maharitra.
Jumper F1. Ny vanim-potoana mitsaha-mitombo dia 84 andro aorian'ny fivoahan'ny zana-ketsa. Ho an'ny famokarana aloha, azo atao ny maniry eo ambanin'ny fonony. Maitso maitso ny ravina. Tavoahangy lava be. Mety amin'ny fanodinana. Mora diovina.
Hibrida vaovao antenaina eny an-tsena
Famoriam-bahoaka F1. Ny vanim-potoana maniry dia 95 andro aorian'ny fidinana ny zana-ketsa. Mety hojinjaina amin'ny fiandohan'ny lohataona any amin'ny faritra misy toetr'andro malefaka. Fanoherana avo ny voninkazo. Fanadiovana mora. Mamokatra be. Famonoana waxy mahery hiarovana amin'ny thrips.
Fenser F1. Ny vanim-potoana maniry dia 110 andro aorian'ny fidinana ny zana-ketsa. Manolotena hitombo amin'ny fahavaratra sy amin'ny fararano, fa amin'ny ririnina koa. Matevina sy lava ny fotony. Maitso mainty ny ravina miaraka amina voninkazo mangatsiaka mamelana. Mety amin'ny fitehirizana maharitra.
Volker F1. Ny vanim-potoana mitsaha-mitombo dia 115 andro aorian'ny fivoahan'ny zana-ketsa. Nihalehibe noho ny fikolokoloana sy fanodinana. Bulgarian karazana. Mety amin'ny famokarana andry. Be-vokatra amin'ny palatability avo. Tsy mitovy amin'ny fanamiana avo.
Ny fahaizana manome legioma vaovao amin'ny tsena mandritra ny taona maoderina dia tombony lehibe amin'ny fifaninanana ho an'ny sehatry ny fambolena. Ny iray amin'ireo fomba tena fanaovana an'io dia ny fambolena voly ririnina. Ary izany koa dia antony tsara iray hijerena manokana ny voankazo.
Ny orinasa Bejo, miaraka amin'ireo orinasam-pambolena marobe any atsimon'i Russia, dia nanao fanandramana momba ny fambolena hodi-kazo amin'ny ririnina nandritra ny roa taona.
Mandalina ny fomba hisafidianana hybrida mety indrindra ny manam-pahaizana mba hamaritana ny daty fambolena tsara indrindra amin'ny ririnina. Ny traikefa amin'ny famokarana dia mbola azo ihany, fa amin'ny ankapobeny ny fizotran'izany dia mitohy am-pahombiazana. Faly foana izahay mizara aminareo ny tsiambaratelo momba ny famokarana mampanantena.
Misimisy kokoa momba ny vokatra Bejo:
Fambolena amin'ny jiro vaovao
Fametrahana tokana misy jiro mena, manga ary ultraviolet dia napetraka ao anaty sahan-kavo any Netherlands, izay sady fametrahana zavakanto no ...
Ny tompon'andraikitra ao amin'ny faritra Astrakhan dia hamindra any amin'ireo mpampiasa vola tany tsy misy tompony